KYEE SHWE & SISTER COMPANY
Kyee Shwe & Sister Company was established in 1986. It has started its work by inventing, producing and distributing Seamen Accessories and Equipment. In 1989, it has placed orders for high quality goods from Thailand and China. It imported and distributed there goods in domestic market. In 1994, PPE products of Singapore, Thailand and China with ISO recommendation were imported and distributed. Since 2002, this company has been importing and distributing high quality products from Malaysia, Singapore, Thailand and China up to now.
In addition to joint importing of products having international certificates and ISO together with international business enterprises, the company has been manufacturing products of consumer’s choice in co-operation with foreign factories.
Kyee Shwe & Sisters Company is importing and producing only those high quality products which are harmless and reliable, which do not endanger to life of user and which has safety in work site and on job condition. At the same time, the company in also exporting its product.
Kyee Shwe & Sister Company has made effort to acquire recognition and recommendation certificate in the country and it will distribute only reliable and safety PPE products.
Kyee Shwe & Sister ကုမ္ပဏီသည် Personal Protective Equipment များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသာမက နိုင်ငံရပ်ခြားနိုင်ငံများသို့ပါ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျှက်ရှိသော PPE Supplier ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည်။
Kyee Shwe & Sister ကုမ္ပဏီကို 1986 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Seamen Accessories & Seamen Equipment များကိုကိုယ်တိုင် တီထွင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းတို့ဖြင့် လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
1986 ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုမှာယူတင်သွင်း ရောင်းချခဲ့ပြီး မြန်မာပြည် ဈေးကွက်အတွင်းသို့ နိုင်ငံတကာမှ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများအား စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်ဈေးကွက် ပွင့်လင်းလာသည့် 1994 ခုနှစ်တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ISO အသိအမှတ်ပြု PPE Products များကို ဆက်လက် တင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးခဲ့သည်။
ဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အညီ 2002 ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ အရည်အသွေးမြင့် နိုင်ငံတကာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Kyee Shwe & Sister ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျှက်ရှိသော Personal Protective Equipment များကို မြန်မာနိုင်ငံ PPE ဈေးကွက်၏ 80% ခန့်အထိ အသုံးပြုလျှက် ရှိကြပါသည်။
Kyee Shwe & Sister Company imports high-quality personal protective equipments from foreign countries. These high- quality products are widely used in seamen, oil & gas, and quarry workplaces
Boiler suits, which have been invented, produced, and distributed by Kyee Shwe & Sister Company’s experts, are not only distributed across Myanmar, but also exported to other countries.
Besides cooperating with foreign countries to import and distribute products, which have received internationally recognized certification and ISO certification, Kyee Shwe & Sister Company has also been cooperating with foreign factories to produce tailored made product that meet workplace requirements.
Kyee Shwe & Sister ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတကာမှ အရည်အသွေးမြင့် Personal Protective Equipment များကို တင်သွင်းရောင်းချပေးပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ တင်သွင်းရောင်းချပေးလျှက်ရှိသော အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို Seamen, Oil & Gas နှင့်ကျောက်တွင်းလုပ်ငန်းများတွင် တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြပါသည်။
Kyee Shwe & Sister ကုမ္ပဏီ၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ကိုယ်တိုင် တီထွင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးလျှက်ရှိသော ဘွိုင်လာစွပ်များကို မြန်မာပြည်တွင်း ဖြန့်ဖြူးမှုသာမက နိုင်ငံခြားသို့ပါ တင်ပို့ရောင်းချမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
Kyee Shwe & Sister ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Certificate နှင့် ISO လက်မှတ်များ ရရှိထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးလျှက်ရှိပါသည့်အပြင် နိုင်ငံတကာစက်ရုံများနှင့် ပူးပေါင်းကာ လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော Customer စိတ်ကြိုက် ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ထုတ်လုပ်မှုများ ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်
Our intention is to import and export high-quality personal protective equipment’s, which meet international… standards, provides full protection for workplace safety, and gives full guarantee and reliability to the users.
အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် – လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် Personal Protective Equipment များကို နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းကာ နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ အရည်အသွေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများအားပြည်တွင်း ပြည်ပသို့ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ရမည်။
We only import, produce, and distribute high-quality, products that meet international standards and are reliable and safe from workplace hazards,
အားသာချက် – လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ကင်းဝေးပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သော နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ တင်သွင်း ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျှက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
By cooperating with foreign countries on personal protective equipments for workplace safety, we must becomeacompany that meets international standard, which produces and distributes high quality and reliable products that are of international standards to focal and international markets.
ရည်ရွယ်ချက် – နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော၊ သုံးစွဲသူများအတွက် အာမခံချက်အပြည့်ရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် Personal Protective Equipment များကို ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ တင်သွင်း ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးနိုင်ရေးသည် ကျွနု်ပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
Based on experience and expertise that have been obtained by working together with many industries for many years, Kyee Shwe& Sister Company’s mission is to combine the vision to invent more effective and beneficial methods and meet the users’ needs and produce novel, modern, reliable, and. good-quality products, that meet international standards.
ဦးတည်ချက် – စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်တွေ့ကျကျ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အခြေပြုထားသော Kyee Shwe & Sister ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး အမှန်တကယ်အကျိုးရှိသော နည်းလမ်းများကို ခေတ်နှင့်အညီ ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးရေး၊ သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် အညီ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေး စသည်တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ ဆန်းသစ်ခေတ်မီသည့် ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများ ဖော်ထုတ်သွားရန်ဖြစ်သည်။